Myanmar Youth Media Club - GotTalent
PoorBest Special_sec	- Special Programs	TwitterSocButtons v1.4
Got Talent? အစီအစဉ်ကို အခုလို အချိန်အကြာကြီး ရပ်ဆိုင်းထားရတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါ၏။ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီလိုမျိုး ကြာသွားတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အခုအချိန်ကစပြီး Got Talent? ကို တဖန်ပြန်ပြီး ဆက်လှုပ်ရှားသွားပါမယ်။ Got Talent? လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီအစီအစဉ်လေးမှာ MYMC အနေနဲ့ တက်သစ်စ အရည်အချင်းပြည့် လူငယ်အဆိုတော်တွေနဲ့ နောင်ပေါ်ပေါက်လာမယ့် သူတို့ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေအကြားမှာ ပေါင်းကူးတံတားတစ်ခုလိုမျိုး ၀န်ဆောင်မှုတွေ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ MYMC Fan တွေအနေနဲ့လည်း နောင်တစ်ချိန်မှာ နာမည်ရ အဆိုတော်တွေအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာမယ့် လူငယ်သစ်တွေကို MYMC ကနေတစ်ဆင့် အကဲခက်၊ အကြံဉာဏ် ပေးနိုင်သလို၊ ဂီတကို ၀ါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေလည်း တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့်ပရိတ်သတ်ဖြစ်လာနိုင်သူတွေက ဘာအကြံကောင်းတွေ ပေးကြတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုး ဖြစ်စေချင်ကြတယ်စသဖြင့် အလွယ်တကူ သိနိုင်ဖို့အတွက်ကို MYMC က ကြားမှာ messenger အနေနဲ့ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမှာပါ။ ဒီစာမျက်နှာမှာတော့ သီချင်းချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ၊ သီချင်းအသစ်တွေကိုမှ ဦးဦးဖျားဖျား Email ထဲအရောက်ပို့စေကြချင်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ၊ အဆိုတော်တွေနဲ့ သိခွင့်ဆက်သွယ်ခွင့်လိုချင်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအားလုံး အခု အသစ်တိုးချဲ့သွားမယ့် ၀န်ဆောင်မှုမှာပါဝင်ဖို့ လျှောက်ထားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
Got Talent မှာ လျှောက်လွှာတင်ပြီး Member ဖြစ်လာမယ့် ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ ရရှိမယ့် အခွင့်အရေးတွေကတော့MYMC ရဲ့ VIP Member အနေနဲ့ အသစ်ရရှိတဲ့ Samples/Mixtape တွေကို သက်ဆိုင်ရာအဆိုတော်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ Email ထဲတစ်ယောက်စီ အရောက်ပို့ပေးမှာပါ။လူငယ်အဆိုတော်အသစ်တွေရဲ့ သီချင်းတွေကို လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပြောဆို အကြံပေးမှုများကို သက်ဆိုင်ရာ အဆိုတော်တွေဆီကို MYMC က အရောက်ပို့ပေးမှာပါ။ (ပရိတ်သတ်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်က လူငယ်အဆိုတော်အသစ်တွေ အရေးကြီးတဲ့ အားဆေးတစ်ခွက်ပါ)MYMC လူငယ်အသစ်တွေအတွက် CD နဲ့ဖြန့်ပြီး ထုတ်ပေးမယ့် Mixtape တွေမှာ MYMC VIP member တွေအနေနဲ့ အရင်ဆုံး ထုတ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ထုတ်ယူနိုင်မယ့် Address ကိုနောက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်)
အောက်က Form ကတော့ English လို Site မှာတစ်ခါထည်း တင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာပါ။ ရေးထားတာတွေကို Form တင်ဖို့ ပန့်ကြားအပ်ပါတယ်။ အခု Online မှတင်ရသော Form အား English လိုဖြည့်စွက်တင်ပါရန်မြန်မာလိုရေးသားတင်လိုပါက အောက်တွင် အညွှန်းကို ဖတ်ပါ
Nickname (Either in English or Burglish) *
What\_\_\_'s your favorite music? *
ကို Form Attach ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၀င်ရောက်ပါဝင်ချင်တဲ့ လူငယ်အဆိုတော်တွေအနေနဲ့ အထက်ပါ email ကို ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
English & Unicodeချစ်သူ စိတ်ဆိုးနေလားအခန်းနီနီနှင်းဆီနီနီ သက်သေတည်လျက် (Craton)မြန်မာ့ဂီတရေစီကြောင်းအနှစ်၂၀ (BBC)ဆုံနေကျ လပြည့်ညRingtones စာမျက်နှာချစ်ခြင်းသံစဉ်Helping Handထီးရိပ်မဲ့မိုးသည်းညရဲ့ စိတ်ကူးသံစဉ်HappyNewYear ချစ်သူကမ္ဘာပျက်ည၏ တစ္ဆေကလဲ့စားSpecial Valentine 2011Favorite DJMYMC ၂ နှစ်ပြည့် နှင့် Theme SongBus ကားပေါ်ကအလွဲများWe Rock With SkypeGot Talent?us VS themPo PoFacebook တင်ရန် ဓါတ်ပုံရိုက်နည်းများထိုက်ထိုက်စပ်မိစပ်ရာ တိုလီမုတ်စMYMC 2nd Theme SongDisney for HolidaysAndroid for MYMC Radioပုံသွင်းသူများနေခြည်Radio တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်လဲRandom MadnessMiMi AkemiMYMC လေးနှစ်ပြည့် BD	Other Applications	MYMC DJ လျှောက်ရန်ရန်ကုန် MOB လျှောက်ရန်Got Talent? လျှောက်ရန်	Enter your email address:
Content View Hits : 8517214